चुरोट भन्दा पनि खतरनाक ई–सिगरेट, किन खतरनाक छ ? | Makalukhabar.com
चुरोट भन्दा पनि खतरनाक ई–सिगरेट, किन खतरनाक छ ?
भाद्र २३, काठमाडौं । आज भोलि हरेक मानिसको हात–हातमा ई–सिगरेट देखिन्छ । मानिसहरुमा यो फेसनकै रुपमा विकसित भएको पाइन्छ । अझ धुम्रपानका लत लागेकाहरु ई–सिगरेटको हानी कम हुने विश्वासमा यसको प्रयोग गरिरहेका पाइन्छ ।
यसमा पनि विषाक्त रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिने भएकाले यसको लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
के हो ई–सिगरेट ?
ई–सिगरेट अर्थात इलेक्ट्रोनिक सिगरेटलाई पर्सनल वेपोराइजर पनि भनिन्छ । यो इलेक्ट्रोनिक इन्हेलर हो जसले यसमा भएको लिक्विडलाई धुवामा बदलिदिन्छ । यो कोट्रिज, ऐटमाइजर, ब्याट्री र लिक्विडबाट बन्छ ।
किन हानिकारक छ ?
यसमा भएको केमिकलले ई–तरल पदार्थले एन्डोथेलियल कोशिकाहरु, डिएनएको नोक्सान र कोशिकाहरु मार्ने अणुहरुको वृद्धि गर्छ । यसका साथै यो चुरोटमा प्रयोग गरिने फ्लेबर दालचीनी र मेन्थललाई एकैसाथ पिउँदा बिरामी हुने सम्भावना पनि बढछ । यसले फोक्सोलाई पनि असर गर्छ ।
सामान्य चुरोट र ई–सिगरेटको असर उस्तै
इलेक्ट्रोनिक चुरोट र परम्परागत चुरोटको असर उस्तै हुने गर्छ । ई–सिगरेटको धुँवा बाहिर फालेको मात्र देखिन्छ तर यो पूरै केमिकलयुक्त हुन्छ ।
ई–सिगरेटमा निकोटिनको साथसाथै बास्नादार केमिकल पनि भरिएको हुन्छ । जुन सिधै फोक्सोमा पुग्छ । जसले फोक्सोमा क्यान्सरको सम्भावना पनि बढाउँछ । एजेन्सी
नेपालमै पनि अनाैठाे प्रचलन जहाँ दाउराकाे भारी दिएर विवाहको प्रस्ताव राखिन्छ